China MSA Temperature contactless tsy refesi-mandrefy Module Sensor Infrared Thermopile ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rafitra fanaraha-maso | Masoandro
DS ratio: fenitra 8: 1, navadika ho FOV tokony ho 8 °
Ny halavirana tsara indrindra amin'ny fahitana ny mari-pana aloan'ny olona: 20 ~ 50 cm;
Karazana ankapobeny: fandrefesana ny hafanan'ny herinaratra elektrika
Karazana manokana: fandrefesana ny hafanan'ny vatan'olombelona
► Ny modely fandrefesana mari-pana karazana YY-MSA dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiovan'ny mari-pana manodidina, voarara ny fanandramana amin'ny milina mitanjaka, na hampiasaina amin'ny fomba fikorontanana mafana, toy ny fitsofana mivantana ao amin'ny seranan-drivotra.
►Rehefa apetraka sy ampiasana ilay akorandriaka dia azo refesina tsara ny mari-pana mody satria mila mahatratra ny fandanjana hafanana miaraka amin'ilay mari-pana manodidina ny mody. Rehefa tratra ny fifandanjana hafanana dia avela hiova miadana ny maripana manodidina, toy ny fanafanana ny trano. Araka ny traikefa, ny fotoana fandanjana hafanana dia 15 ~ 25 minitra (arakaraka ny fanafanana sy ny insisation ny trano samy hafa).
Teo aloha: Modely fandrefesana mari-pana amin'ny maridrefotra tokana MSC ampiasaina amin'ny fakantsary mari-pana amin'ny mari-pana
Manaraka: Famaritana hafanana tsy dia mifangaro hafanana tsy mitongilana YY-32A
MSE Thermopile Infrared Temperature Scanner Mod ...